BARNAAMIJKA GUULAYSTAYAAL GEEDDIGA WADAAY-WADAAY QEYBTIISA 4-AAD DURUUSTA MAAMUL WANAAGA W/Q RASHIID SULUB CAALIN | Somaliland Tomorrow
July 30, 2017 - Written by eng Maxamed Cabdi
Inagoo aan is hagranayn oo aan samaynayn cudur-daar aan meel gaadhsiisnayn, inuu masuul walba ka soo baxo xilkiisa loo igmaday.
Shicibkeenna oo u dhago nugul inay qaataan wixii wanaagsan ee loo sheego, in fursaddaa qaaliga ah laga faa’iidaysto oo la sameeyo wacyigalin balaadhan oo maamul-wanaagga sharraxaysa.
In la raaco nidaamyada sharciyadda ee waddanka u yaalla, ee isku xidhaya bilayska (xukuumadda), garsoorka iyo hay’adaha sharci dajinta.
Waxay arrintan beersoosha lagu xidho baabuurtu ka soo horjeeddaa sharciga waddo-marista dalkeena ee ay dhowr sanno horteed meel mariyeen golayaasha sharci dajintu.
Ku xidhista beersool ee baabuurtu waxay sababtaa shilalka ugu badan ee waddankeena ka dhaca, iyadoo darawaliintaasi aanay si buuxda u wada arki karayn baabuurta meel ka soo boodda amma kuwa si qaldan waddada u adeegsanaya, gaar ahaan darawaliinta muusiga dallacda amma kuwa moobiladda iskaga hadla ee u daymo la’aan karaya khatarta soo wajahda marka ay baabuurka wadaan.
In muraayad-haadyada ku yaalla labada daaqadood ee dambe iyo ta dhexe oo loogu talo galay inuu ka eego baabuurta ka dambaysa aanu si fiican u adeegsan karayn, maadaama muraayadaha la wada madoobeeyey 90%, inagoo og inay yihiin muraayad-haadyadu waxyaalaha ugu muhiimsan ee ka qeyb qaata baabuur-wadista.
In muraayadda hore ee baabuurka lagu dhejiyo 3 meelood marka loo qaybiyo meel amma meel iyo badh, taasoo u diidaysa darawalka inuu si nafis ah u waddo baabuurka, oo mar-marka qaarna ay darawaladda qaarkood foorarsadaan si ay u arkaan waddada ka horraysa.
Waxa kaba sii daran baabuurta yar ee ay ka mid yihiin Noha iyo Dukhaanka oo gabi ahaanba lagu dahaadho waraaqo xayeysiis u badan oo dhinac lagaga dhejiyo. Taasoo keenaysa indho la’aan baabuur-wadis ku-sheeg ah.
Inay ka khashaafayaan in la garto intay jidadka magaalooyinka dhex mushaaxayaan, oo la shaxaado amma ay diidayaan inay asxaabtooda jidka kula kulmi karta sii qaadaan amma dadka jilicda san.
Mukhaadaraatkii, macaasidii iyo magaalo-joog-xumaddii oo xadhko goostay, iyadoo qaar ka mid ah darawaliinta iyo asxaabtoodu ay ku dhiiraddaan falal dhaqan-xumo oo ay qarsanayaan.
In madaxda dalkeena qaar ka mid ah ay baqdini u gayso madoobaynta muraayadaha, iyagoo aaminsan inay isku qarin karayaan, oo ay kaga badbaadayaan in la qarxiyo amma waxyeello kale loo gaysto, iyadoo qaar kale oo madaxdeena ka mid ahna ay u gayso isla wayni iyo bodowtinimo.
In inteena yar ee Ilaahay maalka ku manaystay waxay u arkaan muraayadaha la madoobaynayo iska sarraysiin ah inteena kale.
In qaar ka mid ah darawaliintana ay ka tahay maan-gaabnimo daba socota ku dayasho gurracan.
Ka khashaafidda dadka qaarkood iyo iska qarinta shaxaadka: sidaynu og nahay waxa jira Taxi yar oo 20 sanno horteed la soo watay oo la soo dhalaaliyey oo farsamo ahaan bodhigooda, mishiinadooda iyo qurxinta gudahoodu ay tahay wax qosol ku jab ah, oo ay tayadoodu aad u liidato, inagoo badankeena la odhan karayo kama badna magaalo –joognimadeenu 70 sanno kama badna, isla markaa la odhan karo 80 sanno horteed waynu kaba la’ayn, oo inyar baa kabo xidhan jirtay bulshadeena. Waxa kale oo aynu ognahay in waqti xaadirkan ay jiritaankeeniiba halis galiyeen abaaro daba-dheeraaday, maamul-xumi, danaysi gaar ah iyo xanuuno inteena fayowi ay yar tahay.Haddaba, waxa la yaab leh in kuwo inaga mid ahi ay kibir, baqdin iyo isla wayni ku beeranto amma ay shaxaad ka cararaan, inagoo rubuc-qarni horteed afka dhulka ku wada haynay.
Qaar ka mid ah darawaladda u adeegsada macsi iyo mukhaadaraatka I.W.M: Kuwaasi waxay ka dhoohan yihiin, in Ilaahay ficiladeena iyo qalbigeena daalacanayo, isla markaana dowladeenu ay indho qudhaanjo leedahay, oo wax la qar-qariyaa aanay suurtogal noqonayn, iyadoo waqti
Madaxda Baqaysa: Waxa la odhan karaa waqtigan casriga ah, qof kasta oo la rabo in wax la yeelo oo Alle tiisii ka dhigay inay aad u fududahay, oo aanay waxba tarayn muraayaddo la madoobaystaa.
Inta maalka haysata: Dardaaranka Ilaahay (SWT) iyo Nabigiisii (CSW) ee ahaa inaynaan dadka iska sarraysiinin aynu qaadano, oo yeynaan garab marin.
Isku Dayashadda: Ku dayashada qaldani waxay ahaan jirtay caqli gaabnimo laga durki jiray waqtigii hore.
Ilaalin la’aanta nabadgalyada: Waxaynu og nahay in adduunkii maanta uu meel xun marayo, oo lagu soo dhuuman karayo baabuur muraayadaha la madoobaysto, oo waxyeello lagu gaysan karayo.
Baabuurtaasi waa tabcaan, waxaana aad u wiiqmay Mishiinkooda lamana sii wadi karo.
Marka ay baabuurtaasi dalcad ka baxayaan, waxay kaga baxaan dirqi amma way ka soo noqdaan dalcadaha.
Baabuurtaasi waxay leeyihiin dhib caafimaad iyo fayo-darri, waayo marka ay socdaan waxay sii daayaan qiiq badan oo ku xidhma agagaarka ay marayaan.
Gawaadhidaasi haddii ay ciladi ku timaaddo farsamadeedu aad bay u adag tahay, oo sahal laguma kicin karo waxaana laga yaabaa haddii ay waddo ku dhex xumaadaan inay waddadii xidhanto oo magaaladii isku xanibanto.
Baabuurtaasi ma laha qalab lagu dayac tiro (spare parts) oo dibadda laga keeno, isla markaana way dhammaadeen qalabkii dayactirka ee looga heli jiray waddanka waayo waqtigoodaa dheeraaday.
In dadka baabuurtaas iska leh la siiyo muddo ay ku fadhiisiyaan, oo ay raadsadaan si kale oo ay ku ceeshaan, isla markaana hay’adaha dowladda ee ay khusaysaa ay iclaamiyaan arrintaasi, maadaama ay dowladdu haysato tansiilaadkii war-baahineed ee looga baahnaa war-galinta arrintan.
Inay Wasaaradda Hawlaha Guud Iyo Gaadiidku samayso liis lagu tirakoobayo baabuurtaas muddada dheer socday ee khatarta keeni kara, oo ay siyaasad cad ka yeelato.
In la badbaadiyo khasaare Nafeed iyo mid Xooleydaba oo faro badan.
In magaaladda laga yareeyo samxadda iyo xanibnaanta badan.
Qalinkii: Rashiid Sulub Caalin. Email: Sulub2007@yahoo.com Tel:0634426781
In loo hogaansamo sharciga iyo amarrada ay bixiyaan Dowladaha iyo Ciidamadda Taraafigu.
In samxadda fooqal-caqliga ah, ee imika ka taagan magaalooyinka dhexdooda in ay kala fududaato, oo ay yaraato isku xidh-xidhnaantii badnayd ee magaalooyinka ka dhex jirtay.
In danta shaqsiga laga tago sida ninka gaadhiga wada iyo ninka wax loo dajinayo amma loo rarayo, islamarkaana laga horaysiiyo danta guud ee Qaranka.
Markaa sideedaba maxaynu ku cabirnaa dadkaynu dooranay?
Sidaynu ula xisaabtanaa?
Maxaan ka rabnaa inay qabtaan Dowlad ahaan?
Maxaa inaga hor taagan inaynu miiska u garaacno oo waxa aynu ka doonayno inta ilaahay ka sokaysa aynu hor dhigno?
Ma riwaayaddii amma dheeshii reer Xamarkaa, oo waxaynu ku wada jirnaa dhiidhii dhammaanteen.